Samsung Galaxy S11: kamaradeeda oo la kashifay mahadnaqa Xiaomi | Androidsis
Xiaomi Mi MIX Alpha wuxuu soo bandhigayaa kamaradda Samsung Galaxy S11
In ka badan lix bilood ayaa laga joogaa tan iyo markii ayaa la soo saaray Samsung Galaxy S10. Sida cad, soo saaraha korean ayaa durbaba shaqeynaya bedelka calanka hadda jira ee qoyska Galaxy S, moodel ay u badan tahay in la soo bandhigi doono iyada oo laga faa'iideysanayo habka ugu habboon ee Shirweynaha Caalamiga ah ee Moobaylka 2020. Marka la eego magaca lambarka Picasso, Samsung Galaxy S11 doonaya inuu hoggaanka sare mar kale hoggaamiyo.
Haa, waa run inay tahay xilli hore in laga hadlo Samsung Galaxy S11, ama laga yaabee inaysan ahayn. Sidan oo kale, ka sokow ogaanshaha faahfaahinta aasaasiga ah, sida inay yeelan doonto farta akhristaha oo lagu dhejinayo shaashadeeda, marka lagu daro xaqiiqda ah in isku xirnaanta 5G ay ku badan tahay dhammaan taleefannada la bilaabay 2020, hadda waxaan ogaanay cusub xogta qaybteeda sawirada.
Kaamirada Samsung Galaxy S11 waxay noqon doontaa layaab run ah
Iyo, dhowr bilood ka hor, waxaan ogaanay in Xiaomi iyo Samsung ay ku midoobeen inay abuuraan muraayad 108 megapixel ah oo leh awood cajiib ah. Tan, waa inaan ku darnaa soo bandhigga rasmiga ah ee Xiaomi Mi MIX Alpha, halkaas oo shirkaddu ay ka qaadatay fursad ay ku muujiso nidaamkeeda kaamirada cajiibka ah, halkaas oo muraayadaha 108 megapixel uu ahaa halyeeyada ugu weyn.
Haa, sida muuqata kamaradda Xiaomi Mi MIX Alpha waa tii uu naqshadeynayay shirkadda soo saarta Seoul. Iyo, maadaama aysan si kale noqon karin, waxa ugu caansan ayaa ah in kamaradda Samsung Galaxy S11 ay ku sharraxeyso isla 108 megapixel sensor si ay usha uga hesho Huawei P30 Pro iyo Mate 30 Pro isla markiiba qeybta sawirka.
In ka badan wax kasta maxaa yeelay, maanta, Samsung way ka hooseysaa kuwa la tartamaya xagga tayada qabashada. Maya, Galaxy S10 ama Xusuusin 10 ma laha kamarad xun, laakiin qaybtooda sawir qaadista way ka fog yihiin inay noqdaan kuwa ugu fiican. Ma maamuli doonaan inay miisaska ku rogaan Kaamirada Samsung Galaxy S11?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Xiaomi Mi MIX Alpha wuxuu soo bandhigayaa kamaradda Samsung Galaxy S11
Xiaomi miyuu ku shaqeeyaa qalabkiisa casriga ah ee loo yaqaan 'Wear OS'?
A Galaxy Note 10 ka jaban? Samsung ayaa ka shaqeyn kara